IBlack Shark 2 Pro izakwaziswa ngokusesikweni eYurophu kungekudala | I-Androidsis
IBlack Shark 2 Pro iya kufumaneka ukuze ithengwe kungekudala eYurophu
I-Black Shark 2 Pro yifowuni yokudlala yakutshanje kuluhlu lweXiaomi, thaca ngokusesikweni kweli hlobo. Uphawu lwesiTshayina yenye yezona zinto zisebenzayo kweli candelo lentengiso. Yimodeli evelisa umdla kwaye yenye yezona ndlela zibalaseleyo kule ndawo yeefowuni zemidlalo, ethi ithengisa kakhulu e China.
Nangona kungekho nto iyaziwayo malunga nokuqaliswa kwale modeli eYurophu. Ngapha koko, ndandingaqinisekanga nokuba le Black Shark 2 Pro yayiza kuphehlelela eYurophu. Ngoku sinesiqinisekiso malunga noku, ethi ibonakalise ukukhanya okungaphezulu kokumiliselwa kwayo.
IXiaomo Black Shark 2 Pro izokwaziswa kungekudala eYurophu. Sele ibonakalisiwe kwiwebhusayithi esemthethweni yenkampani, ukuze sikwazi ukuqinisekisa oku kuphehlelelwa. Nangona ukuza kuthi ga ngoku akukho nto iyaziwayo malunga nomhla wokukhutshwa. Akukho datha kwixabiso eliza kuba nalo.
Ifowuni izakwaziswa ngemibala emithathu eyahlukeneyo eYurophu. Imibala ekhethwe luphawu yile Umthunzi oMnyama, iGreyberg yeGrey kunye neGulf Blue. Le yokugqibela iya kuba kuhlelo olunomda, ke ngokuqinisekileyo baninzi abanomdla kuyo. Kananjalo bonke beza nezinto zefowuni, njengephedi yomdlalo wasekhohlo kunye nokuma.
Ngaphandle kwamathandabuzo, iBlack Shark 2 Pro ibizwa ukuba ibe njalo enye yeemodeli ezaziwa kakhulu ebaleni leefowuni zemidlalo. Uphawu lwaseTshayina lunoluhlu olubanzi kulo mhlaba, nangona uninzi lweemodeli zalo lungazange lufike eYurophu. Ngethamsanqa iyakutshintsha nale fowuni.
Siya kuzimamela iindaba ekusungulweni kwale fowuni yokudlala yaseTshayina Ngekhe silinde ixesha elide ukuba sibe nomhla wokumiliselwa kunye nexabiso eliya kuba nalo kule fowuni ekufikeni kwayo eYurophu. Nangona kule ngqondo silinde inkampani ukuba isinike ezi nkcukacha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » IBlack Shark 2 Pro iya kufumaneka ukuze ithengwe kungekudala eYurophu
Isimbo se-LG 5 ngoku siyafumaneka kwimakethi yase-US